Iyo iPhone neApple Watch zvinoramba zvichitonga pakati pevechidiki | IPhone nhau
Jesu anotema | | IPhone nhau
Mumazuva achangopfuura isu takakwanisa kudzidza data kubva kumagazini inozivikanwa Piper jaffray kwavanoburitsa mhedzisiro yeongororo yakaitwa kune vachiri kuyaruka. Magazini ino yakavhurwa, imwe yemhando dzayo, pakupera kwegore uye nekuuya kwemwaka unotevera, ivo vatotanga chirongwa chekudonha cha2017.
Mune ino nyaya, imwe nhamba ye vechidiki nezve zvavanofarira nekambani yeapuro, Apple, pamwe nezvigadzirwa zvavanazvo. Mhedzisiro yakawanikwa yakafananidzwa neiya yatovepo kubva kune mamwe mazuva, kune imwechete chikamu uye nemibvunzo yakafanana.
1 Iyo iPhone pakati pevechidiki
Iyo iPhone pakati pevechidiki
Kutarisa kwekutanga pane iyo iPhone, mhedzisiro yeongororo yekudonha iri kuramba ichiratidza huwandu hwakafanana neiyo yemagazini yekupedzisira, zvichiratidza kuti iyo iPhone ichiri iyo inonyanya kufarirwa foni pakati pevechidiki. Kunyangwe zvakasiyana neshanduro yapfuura, yakakura mukuzivikanwa, inosvika ku 78 por ciento. Muchinyorwa chakaburitswa pakutanga kwegore, nhamba iyi yaive nemapoinzi maviri pasi, 76 muzana, asi mugore rapfuura, yaive mapoinzi maviri pasi, 2 muzana.
Chikamu chechipiri chine chekuita ne iPhone yakaongororwa yakave iyo kutenga chinangwa mumwedzi mitanhatu inotevera. Mune ino nyaya, iyo data zvine chekuita neshanduro yapfuura inoramba yakatonyanya kufanana, ikozvino yakamira pa 82 por ciento maringe ne81 muzana nguva yekupedzisira. Zvakadaro, iwo akanyanya kuwanda manhamba, isina kumbowanikwa kare rakanyorwa naPiper Jaffray magazini.
Kuchinja chigadzirwa, iyo Apple Watch haisi padhuze neiyo data yeiyo iPhone, ichiri chishandiso chisingaenderane pakati pemudiki. Kunyangwe zvakadaro, iyo data muongororo iyi "yagadziriswa" zvichienzaniswa neshanduro yekupedzisira. Vechidiki pavakaongororwa pakutanga kwegore, chete gumi muzana yavo vaive neApple Watch uye 10 muzana vakati vaida kutenga imwe mumwedzi mitanhatu inotevera. Zvino, mune ino nyowani vhezheni yekuwa 13, mhedzisiro yacho inotevera. Iyo Nhamba yevashandisi vechidiki vane Apple Watch vasvika iyo 12 por ciento, mapoinzi maviri zvimwe, nepo iyo kutenga chinangwa kana chimwe chinhu chakasimuka. A 17 por ciento yevaya vakaongororwa vanotarisira kutenga Apple Watch mumwedzi inotevera, kuwedzera kwe4 muzana.
Kana iwe uchifarira kuziva zvimwe zvakawanda ye data rakaunganidzwa mune ongororo pakati pevechiri kuyaruka, tinokusiira a batanidza nemagazini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Iyo iPhone neApple Watch zvinoramba zvichitonga pakati pevechidiki
Ini ndinobvawo kuIphone uye ndinofara kwazvo nazvo, ndinoda mashandiro eOS uye mashandiro ayo ari intuitive.
CarPlay ndeye "inofanirwa kuve nayo" kune chero mushandisi we iPhone